PlexEarth, Inona no ao amin'ny kinova 2.5 ho an'ny sary Google Earth - Geofumadas
PlexEarth, izay mitondra ny version 2.5 ho an'ny sarin'ny Google Earth
Septambra, 2011 AutoCAD-Autodesk, Google Earth / Maps, fanavaozana
Nofafako ireo endri-javatra izay entin'ny PlexEarth vaovao, izay andrasana hambara amin'ny faran'ny volana oktobra 2011.
Ny antony lehibe nahatonga an'ity fitaovana ity fanekena lehibe dia satria mamaha izay tsy azon'ny programa CAD malaza indrindra (AutoCAD) atao amin'ny tontolon'ny virtoaly be mpanadihady indrindra (Google Earth), ary amin'ny fomba madio indrindra ananantsika io. hita ho an'ny sehatra CAD. Ny tsara indrindra hitako ampiasao ny AutoCAD amin'ny Google Earth.
Izy io dia ny hanana ny fahafahana feno amin'ny votoaty ao amin'ny Google Earth sy ny fitaovana fanorenana mazava tsara amin'ny AutoCAD.
Fantatro izany PlexEarth voalohany tamin'ny novambra 2009, dia ny version 2.0 tamin'ny May 2010, taorian'izany dia nahita fiovana vitsivitsy izahay, nanohana fotsiny ny mandeha amin'ny AutoCAD 2012 saingy ao anatin'ny roa volana dia hahita ny version 2.5 izahay.
I naneho hevitra iray ny mpamorona, izay mody manana fanadihadiana ofisialy tany Amsterdam nandritra ny volana Novambra, ny fanatsarana tafiditra ao fanafahana io no natao miorina amin'ny "nangataka indrindra" ny mpampiasa amin'izao fotoana izao.
Mahery kokoa amin'ny fitondrana sary.
Nahita an'i PlexEarth izahay talohan'ny nanaovany zavatra izay tsy misy afa-tsy izay azony atao sivily 3D na CivilCAD, fa amin'ity tranga ity dia tonga amin'ny fahafaha-manao izay azo atao ihany Raster Design ary izany amin'ny karazana sary rehetra, fa tsy ny Google Earth irery ihany.
Hira sary (mandeha). Ankehitriny, azonao atao ny maka sary mosaic an'ny sary ary manambatra azy ireo ho iray miaraka amin'ny anarana vaovao ary mitahiry ilay georeferansa.
Sary nofonosina (crop). Fanapahana ny ampahan'ny sary miorina amin'ny polygon, mitahiry ny georeferance, ary ho fanampin'ilay fitaovana teo aloha, ny sary dia azo aorina miorina amin'ny geometry manokana, fa tsy voatery ho mahitsizoro. Mety amin'ny fanesorana ireo faritra izay tsy dia misy fandrakofana Google Earth.
Mamono sary (hanoloana). Raha misintona sary iray avy amin'ny Google Earth izahay, ary avy eo manana fandrakofana vaovao izahay, afaka mangataka fanavaozana ny faritra iray ihany izahay nefa tsy mila mamaritra azy intsony. Izaho koa dia mahita be dia be mety amin'ity fampiasa ity, raha sanatria ka te-hisintona sary misy vahaolana avo kokoa izahay Google Earth Pro, fa na dia mitovy aza ny fandrakofana, dia tsara kokoa ny famahana ny pixel raha ampidirina amin'ny AutoCAD.
Azo atao koa ny manafatra sy manondrana sary rehefa mitazona ny lohatenin'ny georeference.
Fanatsarana ny fampiasana modely nomerika.
Araka ny nohazavaiko tao amin'ny lahatsoratro 2.0, PlexEarth dia afaka manafatra modely nomerika avy amin'ny Google Earth, mamorona sehatra, tsipika contour, manisa boky ary zavatra hafa ataon'ny Civil 3D. Na izany aza, nisy zavatra tsy mahazo aina nitranga, ary izany dia ny Google Earth fandrarana el ID Session rehefa manao fampidinana betsaka. Nahitsy io, fantatry ny fitaovana ny isa marobe indrindra avelan'ny Google Earth alaina, ary alohan'ny hamaranana azy ireo dia manidy izy ary manokatra ny Google Earth, izay ivoahan'ny vaovao ID Session Mandeha am-pahamendrehana izy io ahafahana manangona tapakila an-tapitrisany tsy misy olana.
Fiovana eo amin'ny taratasy fahazoan-dàlana
Ankehitriny ao PlexEarth, fa tsy version Standard, Pro sy Premium isan-taona, karazana lisansa telo no natolotra:
Fahazoan-dàlana isam-bolana, mora vidy ihany. Amin'izany dia ho voavaha ny filàna tetikasa manokana, raha tsy mila mandoa fahazoan-dàlana lava, afaka mitrandraka ny mety rehetra tsy atolotry ny AutoCAD.
Fahazoan-dàlana isan-taona. Izy io dia natokana ho an'ireo mpampiasa izay miasa matetika amin'ny lohahevitra, eo amin'ny fandrefesana, ny injeniera, ny geospatial ary ny cadastre.
Fahazoan-dàlana maharitra. Ho an'ireo izay mino fa ilaina amin'ny asa maharitra ilay fitaovana.
Any Espaina dia afaka mahazo ny fahazoan-dàlana miaraka amin'ny Cadmax
Afaka mividy ao amin'ny Repoblika Tseky sy Slovakia ianao CADStudio
Ary any Etazonia CommTech
Ho an'i Amerika Latina, azonao atao izao Download PlexEarth
AutoCAD 2012 sivily 3D Google Earth PlexEarth
Previous Post«Previous Field MobileMapper vaovao ary MobileMapper Office
Next Post Fampitandremana amin'ny mailaka diso amin'ny anaran'ny Geofumedmanaraka »